Fifamoivoizana : narahi-maso ireo sarety mpitatitra ranontany | NewsMada
Ireo sarety mivezivezy amin’ny ora tsy voatokana amin’izany sy ireo mpitatitra ranontany no tena lasibatra tamin’ity hetsika ity. Tanjona ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra ary eo ihany koa ny fanaraha-maso ireo mpanototra tany tsy nahazo alalana.
Nanatanteraka ny hetsika teny an-toerana ny polisy monisipaly sy ny departemanta misahana ny fitaterana sy ny fifamezivezena an-dRenivohitra ary hentitra izy ireo tamin’ny fanatanterahana ny asa.
Enina ireo sarety mpitatitra ranontany tsy maintsy naiditra toerana fihibohana tamin’ny alatsinainy teo. Tsara marihina fa tsy maintsy ilaina ny fahazoan-dàlana manokana avy amin’ny fari-piadidian’ny tanànan’Antananarivo vao afaka mitatitra ranon-tany.
Nanambara ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny kaominina fa efa misy ny fanaraha-maso akaiky ho an’ireo mpitatitra sarety eto an-dRenivohitra indrindra ireo sarety sy posiposy mpitatitra ranontany tsy manana fahazoan-dalana. Tsy mijanona hatreo ny hetsika fa mbola hitohy hatrany.